हामीले पालेका जनावर परिवारको सदस्यभन्दा कम हुँदैनन् र हामीले ती जनावर दिन रात आफूसँगै होस् भन्ने चाहन्छौं । यसैकारण धेरै मानिसहरुले आफ्नो पाल्तु जनावरलाई आफू सँगै सुत्ने छुट दिएका हुन्छन् । कुकुर बिरालोलाई आफूसँगै सुत्न दिइनु ठिकै हो तर कुनै जनावरहरुलाई आफूसँगै बेडमा सुताउनु घातक साबित हुनसक्छ ।
यदि हामीलाई विश्वास गर्नुहुन्न भने यो घटनाबारे जानकारी लिनुहोस् । सबै जनावरहरु मानवसँग सुत्न लायक हुँदैनन्। यो कुरा एकजना महिलाले राम्रोसँग बुझेकी छिन् । ती महिलाले आफ्नो मायालु पाइथनलाई प्रत्येक रात आफू सँगै सुताउने गर्दथिन् । पाइथन उनको टाउकोदेखि खुट्टासम्मै फैलिएर सुत्ने गर्दथ्यो ।
किन किराले दात खान्छ ? कसरी उपचार गर्ने ? दाँतभित्र किराहरू कसरी गुफा बनाएर बस्छन ?
पायल्स भएर आत्तिनु भएको छ ? के हाे पायल्स राेग,पायल्समा के खाने, के नखाने जानी राखाैँ… यसरी गर्न सकिन्छ समाधान